China Pre-ainge atumirwa Inspection Manufacturers uye Suppliers | CCIC
Fujian CCIC Kuedza Co, Ltd.
China Certification & Kuongorora (Boka) Fujian Co, Ltd.
Panguva Production Inspection
Pre-ainge atumirwa Inspection
Mudziyo Loading Rinotungamirira
Pre Shipment Inspection ServiceThe Pre shipment inspection (PSI) also referred to Fina random inspection (FRI), take place when the merchandises is 100% completed, packed and ready for shipment or at least 80% of the lot are finished packing and the rest 20% shall also finish production and ready for sampling. A random sample of finished goods will be pulled, based on statistical random sampling technique, commonly know as ANSU/ ASQC Z1.4, MIL-STD-105E, BS6001, DNI40080, ISO2859 or NF ...
Usati Watumirwa Kuongorora Service
Iyo Pre kutumira kwekuongorora (PSI) zvakare yakanangana neFina random ukaguzi (FRI), zvinoitika kana vatengesi zvapera, zvazara uye zvakagadzirira kutumira kana inosvika 80% yemijenya yapera kurongedza uye imwe 20% ichaitawo kupedzisa kugadzira uye kugadzirira sampling. A random sampuli yezvinhu yakapedza ichadhonzwa, zvichienderana nehuwandu hwekuongororwa sampling nzira, inowanzozivikanwa se ANSU / ASQC Z1.4, MIL-STD-105E, BS6001, DNI40080, ISO2859 kana NF X06-002.
Ona mushumo sampuli
Chii chinoitwa nePSI?
*Muchikamu chino, tinotarisa huwandu usati waiswa kune iye unonyorera;
* Randomly vaswedere mimwe rokuongorora kubudikidza Ndinogara (Chinogamuchirika Quantity Levels) Standard;
* Kunyanya kuona hunoshamisa;
* Uyewo tarisa PO, manyorerwo, ruvara nekuyera, nedanda-bumbiro / musanganiswa / Kunyora cheki, kavha uye kutumira chiratidzo nezvimwe raanotaura kubudikidza wacho;
* Chisimbiso avo rokuongorora ivhu rakanaka;
* Ipaizere mhedziso: "Yakagadzirirwa kune Chaanodaidzira", "Inomira Chipangamazano" kana "Haina Kuenderana Nechinodikanwa Chaanokumbira";
* Advice ainge atumirwa chete kana zvinoda nokuda wacho kana mutengi, zvimwe usaita izvozvo.
Sei Unoda Yekutanga-Kutumira Kutumira Ongororo?
Yekupedzisira-kutumirwa kwekutarisa kwekutakurwa kunoitwa kana chinhu chakatengeswa chanyatsogadzirwa, chakazara uye mune zvese nzira chakagadzirira kutumirwa, saka PSI ndiyo mukana wako wekupedzisira wekuti uone chero zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvisati zvasunungurwa kubva kune yako yekugadzira nzvimbo uye kutumirwa kune yako yekupedzisira. kwaunoda kuenda.
Iyo yakazara yePSI ichabvisa njodzi yechigadzirwa chisina kunaka chinosvika pamusuwo wako uye inokupa kuvimba uye data rakakosha kuramba kutakura kwako uye kutaurirana kwakakodzera gadziriso yekuita chiitiko nemutengesi yako panofanirwa nhau dzizivikanwe.
Redu Zvinokwikwidza Kubatsira
*Anopfuura makore makumi matatu ekuongororwa kwechiitiko;
*Akakodzera kuongororwa kwemhando yekuongororwa neASQ kana AQSIQ;
*Fast reaction service, Chirungu rondedzero mukati memaawa makumi maviri nemasere mushure mekuongororwa;
*Mutengo wehupfumi, tinopaja 168- 288 USD pamunhu-zuva;
* Flexible Nguva Kuronga, Tinogona kuronga yekukurumidza kuongororwa nekukurumidza iwe.
Yakawanda yekuongorora kwevatengi
UNOFANIRA ZVIMWE ZVAKAWANDA
Previous: Wholesale Price Audit Ethical Standards - Factory Audit – CCIC
Next: Hwakanaka Hunhu PH014
Kuongorora Mune Mhando Kudzora
Kuongorora Hwakanaka Kudzora
Kuongorora kwesimba uye kuongorora
uality Panga Inspection
Zvigadzirwa Tracibility Services
Cargo Judicial Nyanzvi Nyanzvi Services